Slitting Line & lotika Length-dalana,
Cold Roll fiforonana Mill
Automatic fonosana Machine
Nanomboka tamin'ny fiorenan'ny, Teneng orinasa manana tahirin-jatony ny famokarana andalana ho an'ny mpanjifa, manana harena ny traikefa ara-teknika. Teo ambany fitarihan'ny an-tokantrano sy mpampianatra manam-pahaizana manokana, Teneng manara-maso ny fihetsiky ny vahiny efa mandroso ny teknolojia ka mitroka, famoronana sy hampivelatra ny hatsiaka malefaka fananganana ny teknolojia. Teneng ny fitaovana nampiasaina tao amin'ny API sodina, fiara, fanorenana sodina, fanaka sodina, fitoeran-javatra orinasa mpamokatra entana, fefy tontonana, fanatanjahan-tena fitaovana sy ny sisa.
Strong ara-teknika tanjaka sy ny fanompoana tonga lafatra ny rafitra dia Teneng ny vato fehizoro.
Teneng manana 15 famolavolana injeniera sy 80 iraka injeniera, izay samy manana mihoatra ny 15 taona ny traikefa eo amin'ny fantsona bary orinasa. Teneng ny tehina mandeha foana ao amin'ny nitarika sisin'ny teknolojia, fanaraha-maso ny fivoarana farany amin'ny teknolojia bary Tube, ao anatiny ho any an-tsena sy ny fiovana ny mpanjifa ny mila, ho fanavaozana ao amin'ny mandroso ny teknolojia ampiasaina amin'ny vokatra.
Address: Xiushui Mansion 1108, No.363 Zhonghua Avaratra Street, Xinhua Dist., Shijiazhuang, Sina.